Iimveliso eziNgcono zokuCoca, i-Eco Car Wash Supplies | OPS Technology
Ikhaya / iimveliso
I-Eco Car Wash Product
Yiyo Unamandla ongeyintambo yokuhlamba imoto, ukukhwela phezulu kukususa ukungcola, i-shellac, i-ornithocopros kunye nokunye, ukushiya imoto ebonakalayo ihlambulukile, igcina i-wax yokugqibela. Inika amandla okucoca kakuhle, ichithe ngokukhawuleza ngamanzi ashushu okanye abandayo. Eco-friendly! Kukulungele ukuhlamba izithuthi ezahlukeneyo.
Akukho mfuneko yokuhlamba kuqala kunye nesiponji ukusula, Ukugcina amanzi kunye neendleko zabasebenzi!
Unokuhlamba ngaphezulu kwezithuthi ezingama-40 uthathe kuphela ingxowa enye ye-500g powder.
Gweba ukukhawulwa ngexesha lokuhlamba imoto.
Ukwandisa ukukhanya kwezimoto.
Ukunciphisa imoto ukuhlamba umkhukula wamanzi, indlela entsha yokukhusela imo
I-SGS, i-TUV, i-CNAS ivunyiwe i-Eco-Friendly Car wash powder.
Umkhiqizo ogqwesileyo ukucocela iivili zevili
Ukucoca ikhefu levili ayifuni i-header sprinkler intloko kunye nompu wamanzi, ukukhenkcelwa kwesikhokelo kunokwenzeka kwaye kucoceke. I-OPS iron ring yokuzihlanza igalelo inemiphumo ekhethekileyo kwiinqwelo zeoli, i-oxides yentsimbi, i-powder powder, ipowder, i-carbon deposition, njl. ngeendawo ezahlukahlukeneyo zesondo!
Ukuthengisa ngokuthe ngqo ngumenzi, ukuqinisekisa iimpahla eziqinisekisiweyo
Ukuchithwa okukhawulezileyo kwaye i-foam ininzi.
Iqulethe iindidi zeebenzi eziqhotyoshelweyo, ezingatshatyalaliswa ngamanzi ngokukhawuleza.
Imveliso yokucoca imoto engcolileyo, ingathathi nantoni na impilo.
Geza uze usule unokususa ngokukhawuleza ukungcola, kulula kwaye kulula.
Kusetyenziswa ngokubanzi kwimoto eyahlukeneyo okanye kwivili levili
IiNkonzo zokuCoca iiNdawo zangaphakathi
Ukusebenzisa i-enzyme yemvelo kunye nemvelo ukukhipha i-citrus oil eyenziwa ngumkhiqizo onokuhlaziywa kwemvelo ngaphandle kokusalela, isebenza ngokuphumelelayo ukususa zonke iintlobo ezinobunzima ngaphakathi nangaphandle kweso sithuthi okanye ikhaya elinempembelelo ekucoceni kunye ukususa iphunga elikhethekileyo.
Susa ngokuqinileyo ukungcola, uvelise umoya omtsha kwiivili okanye indlu.
Ingqungquthela ephuzi ephuzi, i-eco-friendly product
500g ipowidi epakishwe kwisikhwama esinye sephepha okanye ibhokisi yeplastiki.
I-detopgent ye-enzyme ye-orange ingalingana no-500ml amanzi okucoca!
Gxininisa ukucoca i powder yinto efanelekileyo yokuqulunqa i-spray cleaner
Ukulungele ukusebenzisa kwaye kulula ukuyigcina, ungumhlobo ococekileyo wokucoca!
Iipilisi zeeshini zee Windshield
I-Compact Car Windshield Amacwecwe okuCoca, iteknoloji yokuvelisa ephakamileyo, ipomfucu ephuculweyo yamacwecwe e-washer. Iqonga lamacwecwe ahlambulukileyo ahlambulukileyo angatshintshaniswa kunye ne-4L ye-windshield i-spray fluid, Ngokutsho komthamo oqhelekileyo we-tank yokugcina amanzi, yinto yamanzi, engathatha indawo kwaye iphakame emanzini amhlophe eglasi!
Ukususa ngokuphumelelayo zonke iintlobo zeentaba ezinenkani ezinempembelelo.
Iipilisi zomoya ezinokusetyenziswa kwemimoya engabonakaliyo, akukho bhisikizi yamachiza.
Kulula kakhulu ukususa ifilimu yeoli yeglasi kunye neentlobo zezilwanyana.
Le mveliso yinkampani yokucoca ephezulu.
Inokusetyenziswa kuwo onke amaxesha, ngokukhethekileyo kwiHlabathi.
Dissolve ngokugqibeleleyo, akukho nkunkuma kwaye usebenzise zonke iintlobo zeemoto.
Amathebhulethi onke angaphakathi-enye
Sebenzisa imali encinci ekucoceni ekhaya iimveliso ezinokuSebenza okuSebenzayo okuCocayo okuCociweyo! Ezi pilisi zimangalisayo ziya kusebenza ngokufanelekileyo, ngokukhawuleza kwaye zisuse amabala eempahla, amabala ekhitshi, amabala eethayile zangasese, ifanitshala yangaphakathi, imibala yesibane, iikhaphethi ezimdaka kunye nokunye okuninzi kwimizuzu nje embalwa! ukushiya indlu okanye imoto yakho ikhazimla kakuhle!
uyifake kwaye uyihlambulule, intsebenzo elungileyo ukususa nayiphi na inkunkuma.
Ucoceke ngokuzeleyo kwaye uhlale uphila ixesha elide.
Kanye nokuthintela ibhaktheriya ekuzaleni kwindlu okanye kwindawo yemoto.
Sebenzisa ii-enzyme ze-biological ukuze uhlambele amathini ukuze ufezekise umphumo ococekileyo.
Ngohlobo olusenyongweni, olukhuselekile kunye nonobuthi!
Ayikho i-bleach yamachiza nayo ingasetyenziselwa ukucoca ii-st stains ngaphandle kokulimaza.